त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जानलागेका डा. केसीलाई प्रहरीले जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टरमा लग्यो – Online National Network
६ आश्विन २०७७, मंगलवार ०८:४५
काठमाडौं, ६ असोज – जुम्लाबाट काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सत्याग्रहका लागि आएका डा. गोविन्द केसीलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रहरीले जबरजस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगेको छ । सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार डा. केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती ट्रमा सेन्टरमा लगेको जानकारी दिए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्‍नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग राखेर डा. केसीले भदौ २९ गते जुम्लाको चन्दननाथ ६, रानीचौरमा रहेको वाविरा मन्दिरमा १९औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । आज सत्याग्रहको नवौं दिन हो ।
पटकपटक देशको शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका लागि अनशन बसेका गोविन्द केसी पुन यश पटक पनि अनशन बसेका थिए । उनलाइ छाती दुख्ने, सास फेर्न समस्या हुन थालेपछि अनशन बसेको स्थानबाट शनिबार राति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको थियो। सोही दिनदेखि डा. केसीलाई आइसियुमा राखिएको थियो।